हामी कता जाँदै- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
हामी कता जाँदै
विद्युतीय सवारी साधनले आम मानिससँगै हाम्रो सरकारलाई पनि आकर्षित गरेको छ  । आज विश्वभरि नै पेट्रोल, डिजेलको प्रयोगले सिर्जित प्रदूषणले आक्रान्त बनेको छ  ।
पेट्रोल, डिजेलको प्रयोगलाई कसरी कम गर्ने भनेर त्यसको थोरै प्रभाव हामीमा पनि देखापरेको छ । कहिले सम्मलाई हो, थाहा छैन । इतिहासतिर फर्केर यदि हेर्ने हो भने हामीले कहिल्यै कुनै पनि योजनाप्रति लगनशील भएर काम नै गरेनौं । अहिले बहसमा रहेको विद्युतीय सवारी साधन पनि पक्कै राम्रा छन् । तर यसको दिगो प्रयोगमा हाम्रो राज्य कति संवेदनशील छ त ? के साझा यातायातलाई ३ करोड दिँदैमा उपत्यकाबाट इन्धनका सवारी साधन विस्थापित हुन्छन् ? भोलिका दिनमा राज्यलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउने हो भने सडकको मर्मत–सम्भार हुनुपर्छ । दोस्रो, पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन हुनु जरुरी छ । तेस्रो, विद्युतीय सवारी साधनमा केही समयका लागि सबै प्रकारका करमुक्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । अन्यथा हाम्रो अवस्था जहाँको तहीं रहने निश्चित छ ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १२:३९
सिंगापुरबाट बैठक बेकार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाकै नेताले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट टेलिप्रिजेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गरेको विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ  । यसमा डाटा सेक्युरिटी र सार्वभौमसत्ताको प्रश्न नआउने भन्ने छैन  ।
उपचारका लागि विदेश गएको मानिसलाई शारीरिक होस् या मानसिक, आरामको जरुरत पर्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख विदेशिँदा उनले गर्ने कामको लागि कार्यवाहकको व्यवस्था संसारको जहाँ पनि हुने गरेकै विषय हो । यहाँ पनि त्यो भएकै हो । अति गम्भीर विषयमा तत्काल निर्णय लिई हाल्नुपर्ने मुलुकको अवस्था पनि होइन । यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि संशोधन गरी प्रविधिको प्रयोगबाट मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गरेको दखाउनु मुलुकका लागि खटेर काम गरेको रहेछ भनेर देखाउन खोज्नु सिवाय अरु केही होइन ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १२:३८